ချောမွေ့သော 3D ဒီဇိုင်း
တောက်ပြောင်ခြင်း၊ သတ္တုရောင် တောက်ပခြင်း၊ စွဲမက်ဖွယ်ရှိခြင်း
ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်၊ ကြီးမားသော 5000mAh ဘက်ထရီ1၊ ကင်မရာ သုံးလုံးတပ်ဆင်ထားသည့် ပေါ်လွင်တောက်ပသောဒီဇိုင်း - ပေါ့ပါးကျစ်လစ်အောင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း၊ အထူးပါးလွှာသည့်ပုံစံ၊ 3D အနားစောင်းကွေးကိုယ်ထည်၊ 190g အလေးချိန်နှင့် 8.4mm အထူ2သာရှိခြင်း။
သင့်စတိုင်နှင့် လိုက်ဖက်မည့် အရောင်များ
တောက်ပသော အပြာရောင်တွင် ပုလဲရောင် ဖောက်ထားပေးပါသည်။ လက်ဗွေရာမထင်အောင် အမှုန်ဒီဇိုင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။
အလင်းရောင်အောက်တွင် ရွှန်းစိုနေသော အနက်ရောင်ဖြင့် လှပနေမည် ဖြစ်ပြီး အောက်ခြေတွင်ဝှက်ထားသည့် ဆန်းကြယ်လှပသော AG နှင်းမှုန်ဒီဇိုင်းပုံစံကို တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ ခေတ်ရှေ့ပြေးခြင်း၊ လက်ရာမထင်ခြင်း၊ နှင်းခဲပုံစံ အမှုန်ဒီဇိုင်း။
ဖုန်းမျက်နှာပြင်အလင်းအား အမြဲချိန်ညှိနေရပါသလား။ AI နည်းပညာသုံး မျက်ဝန်းကာကွယ်သည့် စမတ်နည်းပညာက သင့်တော်မည့် အလင်းရောင်ရရှိစေရန် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နှစ်သက်သော အလင်းရောင်ကို မှတ်သား၍ အဆင်ပြေအောင် ချိန်ညှိပေးနိုင်သောကြောင့် မျက်ဝန်းအား တနေ့တာလုံး အဆင်ပြေ သက်သောင့်သက်သာရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံပညာအစွမ်းကို သုံးဆ အဆင့်မြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း
80° ထောင့်ကျယ်၊ 13MP ပင်မကင်မရာဖြင့် အလိုအလျောက် focus ဖြတ်ပေးခြင်း +a2MP အနီးအဝေးချိန်ပေးသည့် ကင်မရာ +a2MP မက်ခရိုကင်မရာ။ ကင်မရာသုံးလုံး၏ လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် တလုံးခြင်းစီအား AI ဖြင့် နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်ထားရှိပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံလှပသော ရုပ်ပုံများရရှိအောင် အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။
8MP ကြည်လင်လှပစွာ Selfie ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အရည်အသွေးရရှိအောင် ပုံဖော်ပေးနိုင်မှု။
စိတ်တိုင်းကျ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးသိမ်းဆည်းလိုက်ပါ။ တယောက်တည်း ရိုက်မလား၊ မိတ်ဆွေများနဲ့ အဖွဲ့လိုက် ရိုက်မလား။ စိတ်တိုင်းကျစေဖို့ Selfie ကင်မရာက ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။
AI နည်းပညာသုံး အလှပြုပြင်ပေးခြင်း
AI နည်းပညာသုံး အဆင့်မြှင့်တင်ပေးထားသဖြင့် အသားအရည်ကို သဘာဝကျကျ လှလှပပဖြစ်အောင် အသေးစိတ် ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကြည့်ရှု ချိန်ညှိကာ ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ သဘာဝကျကျ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသော အလှကို ရှုစားကြည့်ပါ။
မူလပုံစံအတိုင်း ရရှိအောင် ချိန်ညှိပေးနိုင်သော Dazzling Mode4
အားလုံးရှုမြင်ခံစားနိုင်မယ့် အရောင်စိုစို ဓါတ်ပုံလှလှ။ မူလပုံစံအတိုင်း ရရှိအောင် ချိန်ညှိပေးနိုင်သော Dazzling Mode က ဉာဏ်ရည်တုကို အသုံးပြုပြီး အရောင်နေရာချသော ဆော့ဝဲလ်ဖြင့် အရောင်များကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သောကြောင့် သင့် ပုံရိပ်များအား ပိုမို ရုပ်လုံးကြွ ပေါ်လွင်စေပါသည်။
သင့်ရဲ့အထူးခြားဆုံး စတိုင်ကို ထုတ်ဖော်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါ။ ဓာတ်ပုံပြုပြင်နိုင်သော filters ၁၅ ခု (လုံးဝအသစ်စက်စက် ၇ ခု ပါဝင်သည်) ထဲက ကြိုက်ရာကို ရွေးချယ်ပြီး ဓါတ်ပုံများအား အနုပညာမြောက်အောင် ပြင်ဆင်ဖန်တီးကြည့်ပါ။
YouTube ကို 21.02 နာရီကြာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 5% ပဲ ဖုန်းဘက်ထရီကျန်ပါသလား။ အားကုန်သက်သာစေသည့် Super Power Saving Mode5 ကြောင့် 1.84 နာရီကြာ ဖုန်းပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ညအချိန်အတွက် အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်စေမယ့် Super Nighttime Standby Mode6 က ညချမ်းအချိန်ခါအတွက် 1.21% သာ ဖုန်းဘက်ထရီ လျော့မည်ဖြစ်သည်။
လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်အဝရရှိအောင် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားသည့်အပြင် လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ညအချိန်တွင် ဖုန်းအားသွင်းခြင်းများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်ရှိအောင် AI နည်းပညာသုံး၍ ကာကွယ်ပေးထားပြီး
အားသွင်းစဉ် စက်ပူခြင်းမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။ USB Type-C ဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်အဝရရှိအောင် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားသည့်အပြင် လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ညအချိန်တွင် ဖုန်းအားသွင်းခြင်းများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်ရှိအောင် AI နည်းပညာသုံး၍ ကာကွယ်ပေးထားပြီး အားသွင်းစဉ် စက်ပူခြင်းမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။ USB Type-C ဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Lag ဖြစ်ခြင်းကို 18% လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ အမြောက်အများ သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းရှိခြင်း
၊ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲမြန်ဆန်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ် တခုလုံးအား ချိန်ညှိပေးနိုင်ခြင်း၊ app များအား စနစ်နှင့် မကိုက်ခြင်းကြောင့်
အသုံးပြု၍ မရနိုင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အခြား လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဂိမ်းကစားချိန်တွင် စာတိုများအား အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်အောင် စာတမ်းထိုးသည့်ပုံစံ ပြသပေးခြင်း
Black Screen Mode (IN ID များအတွက်သာ)
ဖုန်းမျက်နှာပြင်အား ပိတ်ထားစဉ် ဗီဒီယိုဆက်လက်ဖွင့်ပေးခြင်း။ သင့်အား အဆက်မပြတ်ဖျော်ဖြေပေးနိုင်ခြင်း။
သုံးလက်စ App အား ချုံ့ပေးနိုင်ခြင်း
အသုံးပြုနေသော App အား ချုံ့ပေးခြင်းဖြင့် အခြား App အား အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
1. ဘက်ထရီ၏ ပုံမှန်ဝင်ဆန့်မှု ပမာဏမှာ 5000mAh ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးဝင်ဆန့်မှု ပမာဏမှာ 4890mAh ဖြစ်သည်။
2. OPPO A16 ၏ ပျမ်းမျှအထူမှာ 8.4mm ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှ အလေးချိန်မှာ 190g ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်သည် ကုန်ပစ္စည်းအား တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တိုင်းတာမှုပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းကိုသာ ကိုးကားရန်ဖြစ်သည်။
3. OPPO A16 ၏ အနောက်ကင်မရာများမှာ 13MP ၊ 2MP (မက်ခရို) နှင့် 2MP (အနီးအဝေးချိန်ပေးသည့် ကင်မရာ) တို့ဖြစ်သည်။ ကင်မရာကို 13MP ပုံရိပ်ရရှိအောင် ပုံသေထားရိုက်ကူးမည်ဖြစ်သည်။ ရှေ့ကင်မရာမှာ 8MP ဖြစ်သည်။
4. မူလပုံစံအတိုင်း ရရှိအောင် ချိန်ညှိပေးနိုင်သော Dazzling Mode ကို 4GB+64GB ဗားရှင်းများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းနှင့် နိုင်ငံအပေါ်လိုက်၍ အသုံးပြုနိုင်မှုရှိမရှိ ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
5. Super Power Saving Mode ၏ အချိန်ကို တိုင်းတာရာတွင် အက်ပလီကေးရှင်း ၆ ခုအား ရွေးချယ်၍ Super Power Saving Mode အသုံးပြုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုချင်းစီနှင့် အချိန်ကို စမ်းသပ်ရာတွင် အခြားအက်ပလီကေးရှင်းအား ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်းမပြုပဲ Super Power Saving Mode ဖြင့် စမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
6. Super Nighttime Standby Mode စမ်းသပ်မှုကို 23:00 မှ 07:00 အထိ စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး Always-On Display ၏ ပါဝါစားသောပမာဏမှာ ၈ နာရီကြာချိန်အတွင်း ဘက်ထရီ၏ 1.21% သာဖြစ်သည်။
7. “Lag ဖြစ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးခြင်း” ဆိုသည်မှာ ဖုန်းလုံးဝ freeze မဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မတူညီသော နက်ဝက်အခြေအနေ၊ ဖုန်းအသုံးပြုသူနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများအပေါ်မူတည်၍ အမှန်တကယ် အသုံးပြုသော အတွေ့အကြုံသည် ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။
8. အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဖော်ပြချက်များသည် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူ အပြောင်းအလဲကြောင့် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
9. အချက်အလက်များကို OPPO ဒီဇိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်းတာချက်များ၊ စမ်းသပ်ခန်းအတွင်းမှ စစ်ဆေးရရှိသော အချက်အလက်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများထံမှ ရရှိသော အချက်များထံမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် လက်တွေ့အခြေအနေတွင် စမ်းသပ်သည့် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်သည့် ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း ဗားရှင်းပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
10. ကုန်ပစ္စည်း ဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ထွက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းသည် လက်တွေ့နှင့် အနည်းငယ် ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
11. ပုံရိပ်များအားလုံးကို သရုပ်ဖော်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မှ ဖက်စပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိပါ။